Indlela reindeer UKhisimusi: Master Class
Christmas inyamazane njengoba iwuphawu uNcibijane esefikile kithi evela Melika. Ngoba kulapho Santa Claus ugibele isihlibhi edonswa reindeer. Lesi silwane othanda ngakho, okuyinto kaningi eyayisetshenziswa emiklamweni ye kaNcibijane izingubo, napkins, amathoyizi nokunye. Sikunikeza ukuze ufunde indlela ukwenza reindeer Christmas ngezindlela eziningana.
Izihloko ezenziwe ngokhuni
Lokhu reindeer Christmas ngezandla zakhe wenza emagatsheni ezivamile futhi izingodo ukuthi zingatholakala kuleli hlathi. Amathuluzi nezinto zokwakha ukwesekwa okudingayo isaha, sokuprakthiza, inhlangano ingcina, ibhola elibomvu. kubalulekile ukuthatha ucezu enkulu izinkuni, omunye log kancane (ngenhloko), amagatsha amane ezifanayo (for the izinyawo) kanye nomunye okufanayo (entanyeni), iqhubu, amagatsha nomzimba omncane, ukuze wenze izimpondo ngoba umzimba yokukhiqiza.
Lungisa yonke imininingwane. Kuze kube yimanje, okwabonwa usike yonke izingodo kanye namagatsha nobude oyifunayo.
Ukusebenzisa sokuprakthiza ukwenza izimbobo ezine imilenze log obukhulu.
Kancane ugaye amagatsha oyedwa of the imilenze.
Gcwalisa emigodini ye-glue umzimba bese ufaka amagatsha nasemilenzeni.
Yenza imbobo emzimbeni nge Ngakolunye uhlangothi futhi ugongolo ikhanda-entanyeni bese ufaka ngendlela efanayo njengoba imilenze, igatsha elifanele.
Namatsisela Isigaxa umsila endaweni.
Yenza izimbobo ezincane ekhanda bese ufaka Amahlumela-izimpondo.
Namatsisela ikhanda ukuze ibhola elibomvu isikhundla ekhaleni.
Hlobisa inyamazane angasebenzisa isikhafu obomvu iboshelwe entanyeni.
Izihloko ezenziwe ngendwangu
Uma une ezilahliwe ambalwa engadingeki lendwangu, musa ukusheshe abaphonse baphume. Kubo ungenza cute inyamazane Christmas. Kuye ngobukhulu lendwangu ungathola ithoyizi ukuba ingane, umhlobiso ku sikakhusimusi noma imihlobiso ikamelo (isib, iwindi sill).
Ngakho, ukusika iphepha ngalé kwezindaba njengenyamazane. Khona-ke ninamathele ndawonye ezimbili amanikiniki ubuso Indwangu ngaphakathi. Namathisela iphethini bese udweba ke. Sika Indwangu workpiece, wahlukana polsantimetra wesifunda. Thunga izingcezu ezimbili ndawonye noma ukubahlanganisa esiphethe isibhamu glue, kusale ukuvulwa encane. Susa ithoyizi futhi agcwalise it in ukupheda-polyester, ukotini noma yimuphi omunye excipient. Thunga noma ukumboza emgodini.
Ithoyizi siphelile thunga inkinobho-glazik, thunga umlomo wakhe nekhala. Uma uhlela reindeer Christmas hang on isihlahla sikaKhisimusi, bese unamathisele iribhoni.
Washa imicamelo kanye nezinyamazane
Kuvele okufana ezithakazelisayo Year New umhlobiso - ukuhlobisa zokuhlobisa imicamelo Silhouettes ezinyamazane. Ungasebenzisa i pillowcase ubudala, futhi ungenza amasha.
Vele uthathe amabili okufanayo indwangu amanikiniki, okuyinto usayizi zizongena kwemigomo umcamelo. Thunga ndawonye ezinhlangothini ezintathu, kanti owesine ukunamathisela inyoka. Dweba ephepheni ngalé kwezindaba njengenyamazane. Kungaba njengoba uhlaka lonke isilwane, futhi isithombe sakhe. Khona-ke ukuphuma iphethini bese ulinamathisela endwangwini ukuthi ihlukile umbala kusukela pillowcase.
Namatsisela ucezu ukumboza, noma thunga it yaseZimbabwe ezithakazelisayo. Ukuze ahlobise ngal, ungasebenzisa kudabuke (unamathele entanyeni), izinkinobho noma rhinestones (ukwenza amehlo kanye nekhala) nezinye izesekeli.
Kusuka izinto ezinjalo ezimangalisayo like plastic, musa uthole okuningi Christmas yezandla. Ungathenga anemibala noma ezimhlophe bese ukuhlobisa ngokwakho. Ngokwesibonelo, ukuze uthole reindeer Christmas (ngenhla), uzodinga brown nemibala, beige, abamnyama, abamhlophe futhi abomvu. Amathuluzi uzodinga ukuthatha ipensela noma Wand ekhethekile nge ithiphu. Lokhu ikhithi elula ikuvumela ukuba wenze yezandla ezifana reindeer Christmas ngezandla zakhe.
Thatha obuncane plastic ensundu Roll ibhola lokuqala, futhi ezimise ke izingxenye ipheya emise.
Yenza ikhefu elincane zamehlo. Uma kungekho amathuluzi akhethekile, sebenzisa umdlalo.
beige Plastic ukwenza okusaqanda encane bese ulinamathisela ngaphansi iso ekhosombeni.
Yenza imibuthano black ezimbili ezincane, bese ufaka phakathi enethiwekhi iso.
Bakha indilinga encane ebomvu awubeka ukuma ekhaleni.
Yenza eliphakathi kwe-ukuma ingxenye ukuthi ubukhulu kuyoba nohafu kunangendlela ekhanda.
Xhuma umzimba futhi ikhanda.
Ingabe ukunaka izimbobo ezimbili phezulu.
Plastic beige wenze izimpondo amancane uzifake izimbobo.
Yenza indlebe eyodwa.
Yenza izingxenye ezine ezilinganayo nemilenze nezingalo. Namathisela ukuba izindawo ezifanele.
Roll ezine ezifanayo kancane ibhola omnyama, level in a Pancake futhi kumenze abe imbobo encane. Kuyoba uzipho.
Namathisela uzipho ukuze izandla nezinyawo.
hat Red ukwenza plastic, kodwa kusukela emhlophe - noboya.
Namathisela cap ekhanda kuthabathela ecaleni.
Nika Umfanekiso ukuze ome noma yome it kuhhavini.
reindeer Paper Christmas
Indlela elula - ukwenza inyamazane ephepheni. Thatha ucezu amakhadibhodi noma kraft iphepha, bese usika ngalé wakhe isilwane. Khona-ke thatha izinkinobho elibomvu, strazik noma buhlalu futhi lezo-ke esikhundleni ekhaleni. On entanyeni Tie isikhencezo ezincane, okuyinto zingathengwa esitolo ngobuciko. Top wenze umgodi usungulo, uhala string zokuhlobisa noma ama-ribbon.
Lapho ukusebenzisa yezandla?
Uma nizizwa nesaba lapho ukuthi uzakwenza izikebhe kakhulu, nenze iphutha. Kukhona izindawo eziningi engase aklonyeliswe ngosizo inyamazane Christmas: etafuleni lokudlela, ifasitela Sills, ifenisha, esifubeni zangaphansi ephasishi, ezincwadi ngisho esibukweni yokugezela. Ngakho ngosizo a yezandla encane ungakha umkhathi samaholide kulo indlu.
Umphetho phansi, iphethini: ukwakha into design ngokwakho
Indlela yokwenza insipho kusuka ekuqaleni ekhaya
Indlela ukuqeda kweletu
Pirke yokuhlola: ukufunda, kokuhlaziywa
Isiprofetho sikaVyacheslav - umfana othunywe nguNkulunkulu
Ukunakekelwa Newborn ezinsukwini zokuqala zokuphila
Kusukela ngomhla ka-qapha ukuze wenze i-TV: izici uxhumano
Vase okuhlobisa elingaphakathi yesimanje
Ukusetshenziswa "Ambrobene" ngesikhathi sokukhulelwa: ukubuyekezwa imiphumela